कोरोना महामारी बीच आउँदै गरेको दशैं हो कि दशाः छैन रौनकता, चहलपहल र खुशीयाली !!! - Aathikbazarnews.com कोरोना महामारी बीच आउँदै गरेको दशैं हो कि दशाः छैन रौनकता, चहलपहल र खुशीयाली !!! -
कोरोना महामारी बीच आउँदै गरेको दशैं हो कि दशाः छैन रौनकता, चहलपहल र खुशीयाली !!!
विश्वव्यापीरुपमा अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिममा अहिले हाम्रो देश नेपाल छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । कोरोना भाइरसबाट ५७८ को मृत्यु भएको छ भने ९५ हजार २ सय ५३ जना कोरोना भाइरससंग लडिरहेका छन् । यस्तो विषम, विपत र अप्ठ्यारो बेला नेपालीहरुका महान चाड विजया दशमी, तिहार र छठ पर्व शुरु भएका छन् । तर, छैन कतै पनि चहलपहल, रौनकता र खुशियाली भन्दा फरक पर्दैन । ६ महिनाको घर भित्रको बसाईबाट दिक्क भएका जनता लकडाउन अन्त्यसंगै ह्वात्तै बाहिर निस्कदा नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा फस्दै गएको देखिन्छ । सदा जस्तै कतै पनि व्यापारीक महलहरुमा छैन चहलपहल, छैन व्यापार, दशैं आएको रौनकता अझै छाएको छैन । दशैंमा भीडभाड हुने न्यूरोड सुनसान जस्तै छ । वाण्डेड सामान पाउने दरबारमार्ग सुनसान मात्रै छैन । ग्राहक कहाँ छन् भनी खोज्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
लकडाउन र आम्दानीमा असर
कोरोना भाइरसका कारण भएको लामो लकडाउनले उद्योग धन्दा देखि पान पसलसम्म बन्द रहे यसबाट आम्दानीमा कमी मात्रै आएन घर चलाउन पनि धौ धौको अवस्था आयो ।
३ महिना देखि घरधनीले भाडा पाएका छैनन् । लामो लकडाउन पछि खुलेको उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा अहिले आम्दानी छैन । पसलमा ग्राहक छैन । उद्योगमा उत्पादन घटेको छ । व्यवसायहरुमा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता छैन । यस्तो बेला आउन लागेको दशैंलाई कसरी खुसीयाली बनाउने चिन्ता र चासो बढेको देखिन्छ ।
आग्रह दशैं जहाँ छौं त्यही मनाउ
काठमाडौं उपत्यकामा करिब ४० लाख जनसख्या छ । पछिल्लो समय राजधानी नै कोरोना भाइरसको केन्द्र बिन्दु हुँदै आए पछि राज्यले यस पटकको महान चाडपर्वहरु जहाँ छौं त्यही बसेर मनाउन आग्रह गरेको छ । तर, नेपालीहरु गाउँ जाने क्रम बढेको छ ।
यसबाट गाउँ घरमा कोरोना भाइरस पुग्ने अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ । नेपालीका महानचार्ड ठूलो हर्ष र उत्सवबा साथ मनाउन गाउँघर नै रमाइलो भन्दै दिनदिनै १÷२ हजार मान्छे घर फर्किरहेको तथ्य हामी सामु छ । यसबाट गाउँ–गाउँमा सहजै कोरोना पुग्ने विज्ञहरुको अनुमान छ ।
बोनस होइन तलबकै चिन्ता
गतवर्ष झै यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण आम्दानी घटेपछि प्राइभेट कम्पनीहरुले तलब दिननै धौ धौ देखिन्छ । बोनसको कुरा त गौण बन्दै गएको देखिन्छ । यसले यी महान चाडपर्वलाई कति असर पर्ने हो त्यो प्रतिक्षाकै विषय बन्ला । थला परेका उद्योग धन्दा व्यापार, व्यवसायबाट ठूलो आश राख्नु नै गलत हो भन्न सकिन्छ ।
माग नबढेपछि उत्पादननै भएन
दशैँ तिहारको अवधिमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा बढी खपत हुने गर्दथ्यो । उद्योगहरुले पनि चाडवार्ड लक्षित उत्पादनहरु बजारमा ल्याउँथे र बिक्री गर्थे । तर, यसवर्ष भने न उद्योगले उत्पादन गरेका छन् न बजारमा माग छ भन्दा फरक पर्दैन । ‘बजारमा माग नै छैन, दशैँ लाग्यौ है भन्न सकिने अवस्था नै छैन । बजारबाट माग नै नआएपछि उत्पादन गर्ने कुरै भएन ।
लामो समय लकडाउन हुँदा मध्यम वर्गका मानिसहरु बढी पीडित बन्दा उनीहरुको आम्दानीमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताकै आम्दानी नभएका कारण बस्तुको बजार माग घटेको देखिन्छ । हरेक महिना सिमित तलब खाने सानो वर्गबाहेक सबैजसो उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको भन्न सकिन्छ । नियमित काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने र थोरै बचत भएको पैसाले दशैँ मनाउने वर्गका मानिसहरु यसवर्ष दशैँ मनाउन सक्ने अवस्थामा नै नरहेको बजारका जानकारहरुको बुझाई छ । आम्दानीमा अस्वभाविक ह्रास आएका कारण यसपाली खुलेर चाडपर्व मनाउन सकिने अवस्था छैन ।
गाउँ गएका राजधानी किन आएनन् ?
काठमाडौँका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र न्युरोड, ठमेल, असन, दरबारमार्ग, ललितपूरको लगनखेल, जावलाखेल जस्ता ठाउँमा अहिले चहलपहल सामान्य मात्रै छ । दशैँको मुखैमा पनि यी क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट बाहेक व्यापारिक गतिविधि नहुनुको पछिल्लो लकडाउनको समय काठमाडौँ छोडेकाहरु नआउनु नै हो । लकडाउनको बीचमा स्थानीय तहहरुले काठमाडौँमा रहेका आफ्ना नागरिक गाडी रिजर्भ गरेरै गाउँ लगेका थिए । उनीहरुमध्ये अहिले २५ प्रतिशत पनि राजधानी नफर्किएको देखिन्छ । गाउँमा सोझै जाँदा कोरोनाको शंका गर्ने र पीसीआर परीक्षण गरेर जाँदा परीक्षण शुल्क महँगो रहेकाले पनि अधिकांश व्यक्तिहरु काठमाडौँमै दशैँ मनाउने सोचमा रहेको भन्न सकिन्छ ।
गाउँ घरमा अब फेरि राजधानी जानेहरुको भीड बढेको देखिन्छ । यसले परिवारमै कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर बढेको पककै छ । तर, वर्षमा १ पटक परिवार बीच बस्ने परम्परा छ । परम्परालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका नेपाली हामी बीच अब सचेत र सजग भएर सुरक्षाका सबै विधी अपनाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो विर्सनु पटक्कै हुँदैन । यस पटकको दशैं हुने खानेहरुका लागि दशैं भएपनि हुँदा खाने र कमाएर खानेका लागि दशा हुने प्रस्टै देखिन्छ । पीडा, दुखका बेला आएका यी महत्वपूर्ण चार्डपर्वलाई कसरी उतार्ने हो त्यसको चिन्ता बढ्नु स्वभाविक होला । तर, कोरोना संक्रमणबाट बच्नु र अरुलाई बचाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बन्नु जरुरी छ । (राजतिलक साप्ताहिकबाट साभार गरिएको)
लक्ष्मी बैंक खुल्ला गल्फ प्रतियोगिता २०१९
डीबीबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर लिने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय
सिटिजन लाइफकाे नाफा बढ्याे
सनराइज बैंकको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम
प्रभु बैंक लिमिटेडको शाखा ढुंगेधारामा
लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात चैत १० बाट अनिश्चितकालका लागि बन्द
दशैंमा बैंकका कर्मचारी मालामाल